File:Reggio Calabria montage 2.jpg
The city of Bronze, Capital of Magna Grecia
Reggio Calabria is located in Earth
Coordinates: 38°05′N 15°40′E﻿ / ﻿38.083°N 15.667°E﻿ / 38.083; 15.667Coordinates: 38°05′N 15°40′E﻿ / ﻿38.083°N 15.667°E﻿ / 38.083; 15.667
Reggio Calabria City Council
18st, Italy (100 in EU)
Af-Taliyaani : Reggino (masculine), Reggina (feminine)
Af Ingiriis :
89120; 89121 to 89135
Reggio Calabria waa magaalada ugu weyn Calabria. Waxay leedahay dad lagu qiyaasay ku dhawaad ​​200,000 waana magaalada kow iyo labaatanaad ee ugu dadka badan Talyaaniga, kadib Modena, iyo magaalada 100aad ee ugu dadka badan Yurub. Reggio Calabria wuxuu ku yaal bartamaha saxda ah ee badda Mediterranean waxaana lagu yaqaanaa cimilada, kala duwanaanshaha qowmiyadaha iyo dhaqanka. Waa xarunta dhaqaalaha saddexaad ee dhulweynaha Koonfurta Talyaaniga. Qiyaastii 560,000 oo qof ayaa ku nool nawaaxiga magaalo weynta, oo Jamhuuriyadda Talyaanigu u aqoonsatay 2015 inay tahay magaalo weyn. Reggio wuxuu ku yaalaa "suulka" gacanka Talyaaniga waxaana ka go'ay jasiiradda Sicily ee Marinka Messina. Waxay ku taallaa dhaadhacyada Aspromonte, oo ah buuro dhaadheer oo buuro leh oo dhex mara badhtamaha gobolka.
Maaddaama ay tahay tiir weyn oo ka shaqeeya gobolka, waxay xiriir taariikheed, dhaqan iyo dhaqaale oo xooggan la leedahay magaalada Messina, oo ku teedsan marin -biyoodka Sicily, oo samaysa magaalo metro ah oo ka yar 1 milyan oo qof. 
Reggio waa magaalada ugu da’da weyn gobolka, xilliyadii hore, waxay ahayd gumeysi muhiim ah oo kobcayay Magna Graecia. Reggio wuxuu leeyahay nidaam magaalo oo casri ah, oo la aasaasay ka dib dhulgariirkii ba’naa ee 1908, kaas oo baabi’iyey inta badan magaalada. Gobolka waxaa ku dhacay dhulgariir. 
Waa xarun dhaqaale oo weyn oo loogu talagalay adeegyada gobolka iyo gaadiidka ee xeebaha koonfureed ee Mediterranean -ka. Reggio, oo leh Naples iyo Taranto, waxay hoy u tahay mid ka mid ah matxafyada qadiimiga ah ee ugu muhiimsan, Matxafka Qaranka ee Qadiimiga ah ee Magna Græcia, oo loo hibeeyay Giriigii Hore (oo ay ku yaalliin Bronzes of Riace, tusaale dhif ah oo ah farshaxan naxaas Giriig ah, oo noqday mid ka mid ah astaamaha magaalada). Reggio waa kursiga, ilaa 1907, ee Kormeeraha Qadiimiga ee Bruttium iyo Lucania.
Bartamaha magaalada, oo ka kooban dhismayaasha Xorriyadda, waxay leedahay horumar toosan oo xeebta ah oo leh waddooyin isbarbar socda, socodkuna wuxuu ku yaallaa magnolias dhif iyo timir qalaad. Reggio wuxuu inta badan adeegsaday naanaysyo caan ah: “Magaalada Naxaasta”, ka dib Naxaastii Riace oo marqaati u ah asalka Giriigga; "magaalada bergamot", oo si gaar ah loogu beero gobolka; iyo "magaalada Fatamorgana", oo ah ifafaale indhaha laga arki karo Talyaaniga oo kaliya laga soo bilaabo xeebta Reggio.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Reggio_Calabria&oldid=215262"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Agoosto 2021, marka ee eheed 18:42.